စကားမပွောတဲ့ကလေး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
စကား အပွောနောကျကတြာဟာ ကလေးအမြားစုမှာ ကွုံတှရေ့လရှေိ့တဲ့ ပွဿနာတဈခုဖွဈပွီး နောကျပိုငျးအခြိနျတနျရငျ သူ့အလိုလို အကူအညီမလိုဘဲ ရှနျးရှနျးဝအေောငျ ပွောနိုငျသှားကွပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကလေးတှေ ဘာကွောငျ့ စကားမပွောသေးတာလဲ၊ ဒီလိုဖွဈလာရငျ ဘာလုပျသငျ့တယျဆိုတာ သိထားသငျ့ပါတယျ။
ကလေး စကားပွောခြိနျတနျနပေါလကျြနဲ့ မပွောသေးဘူးလို့ ထငျပါသလား? မိဘတိုငျးက သားသားမီးမီးလေးတှရေဲ့ တီတီတာတာ ပထမဆုံး စကားသံလေးကို ကွားခငျြကွမှာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ကလေးတှရေဲ့ စကားပွောဖှံ့ဖွိုးပုံနဲ့ ဘယျအခြိနျမှာ စိုးရိမျသငျ့တယျဆိုတာ မိဘတိုငျး သိထားရမှာပါ။
စကားပွောနောကျကတြဲ့ ကလေးအမြားစုဟာ အခွားကလေးတှထေကျ စကားလုံးတှကေို ပိုပွီးလိုကျမှီနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
>> ဘယျလိုအခွအေနမြေိုးကို ပုံမှနျလို့ချေါမလဲ?
ကလေးတှဟော အသကျ ၁ နှဈလောကျမှာ စကား ၁ လုံးစ ၂ လုံးစ စပွောတတျပွီး အသကျ ၁၈ လကနေ ၂ နှဈလောကျမှာ စာကွောငျး တဈပိုငျးတဈစလောကျ ပွောတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အသကျ ၂ နှဈလောကျထိ စကားမပွောသေးရငျ ပွဿနာတဈခုခုရှိနပွေီလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ စကားပွော နောကျကတြတျတဲ့ အကွောငျးရငျးအမြားကွီး ရှိပါတယျ။
စကားပွောပညာရှငျတှဟော ကလေးရဲ့ နားလညျနိုငျစှမျးကို လလေ့ာပွီး စကားလုံးတှေ၊ စကားလုံးရဲ့အသံတှကေို ခှဲခွားပွီး သငျပေးတတျပါတယျ။ လုပျပွတဲ့ လကျဟနျခွဟေနျ အမူအယာတှကေို လိုကျလုပျနိုငျတယျ ဆိုတာဟာ ကလေးဟာ နားလညျနိုငျစှမျးရှိပွီး ဆကျသှယျနိုငျတယျလို့ သိနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျမပူပါနဲ့။ ကလေးကို အခြိနျတဈခုပေးပွီး စကား လိုကျပွောခိုငျးပါ။
>> စကားပွောနောကျကရြတဲ့ အကွောငျးရငျးမြား
♦ ယောကျြားလေးမြား : ယောကျြားလေးတှဟော မိနျးကလေးတှထေကျစာရငျ စကားပွော နောကျကတြတျကွပါတယျ။
♦ လမစတေဲ့ကလေး : လမစဘေဲ့ မှေးတဲ့ကလေးတှဟော စကားပွောတာ၊ လမျးလြှောကျတာ၊ ပုံမှနျလှုပျရှားမှုတှမှော နောကျကတြတျကွပါတယျ။
♦ အမွှာ : အမွှာတှဟောလညျး စကားပွော နောကျကတြတျကွတယျလို့ သိရပါတယျ။
♦ စကားမြားတဲ့အကွီးတှေ : အကွီးကလေးတှေ အလှနျစကားမြားရငျလညျး အငယျကလေးဟာ သူ ပွောစရာ မလိုတော့သလို စကားပွော နောကျကတြတျပါတယျ။
♦ နားပိုးဝငျခွငျး : ကလေး အလှနျငယျရှယျစဉျမှာ နားပိုးဝငျတဲ့အခါ ကလေးရဲ့အကွားအာရုံကို ထိခိုကျခွငျးက စကားပွော နှောငျ့နှေးစနေိုငျပါတယျ။
♦ အခွားဖှံ့ဖွိုးမှုတှမှော အားသနျခွငျး : တဈခါတလေ အခွားဖှံ့ဖွိုးမှုတှေ ပုံမှနျဖွဈပမေယျ့ စကားပွောတာ နှောငျ့နှေးနတေတျပါတယျ။ ဒါဟာ အခွားအရာတှအေပျေါ ပိုပွီးအားစိကျထုတျနရေတာကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
>> ကလေး စကားမပွောသေးရငျ ဘာလုပျသငျ့သလဲ?
1. ကလေးနဲ့အတူ ဆော့ကစားပေးရငျး ကလေး စကားပွောအောငျ လှုံ့ဆျောပေးပါ။
2. ကလေးမှာ နားပိုးဝငျနတော ရှိ၊ မရှိ ဆရာဝနျနဲ့ သှားရောကျစဈဆေးပါ။
3. ကလေးသီခငျြးခှလေေးတှဖှေငျ့ပွပွီး လိုကျဆိုကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးပါ။
4. အရုပျဖုနျးတှကေလညျး ကလေးစကားပွောအောငျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျပါတယျ။
5. ကလေးကို စကားပွောဖို့ သငျပေးတဲ့အခါ မေးခှနျးမမေးပါနဲ့။ စကား လိုကျပွောခိုငျးပါ။
6. TV အကွာကွီး မကွညျ့ခိုငျးပါနဲ့။
ကလေးအမြားစုဟာ စကားပွော နောကျကတြတျပမေယျ့ အခွားကလေးတှကေို အခြိနျမီလိုကျနိုငျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိုးရိမျနတေယျဆိုရငျတော့ စိတျအေးသှားအောငျ ကလေးဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျတာက အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။
စကား အပြောနောက်ကျတာဟာ ကလေးအများစုမှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်တန်ရင် သူ့အလိုလို အကူအညီမလိုဘဲ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင် ပြောနိုင်သွားကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေ ဘာကြောင့် စကားမပြောသေးတာလဲ၊ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
ကလေး စကားပြောချိန်တန်နေပါလျက်နဲ့ မပြောသေးဘူးလို့ ထင်ပါသလား? မိဘတိုင်းက သားသားမီးမီးလေးတွေရဲ့ တီတီတာတာ ပထမဆုံး စကားသံလေးကို ကြားချင်ကြမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ စကားပြောဖွံ့ဖြိုးပုံနဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ စိုးရိမ်သင့်တယ်ဆိုတာ မိဘတိုင်း သိထားရမှာပါ။
စကားပြောနောက်ကျတဲ့ ကလေးအများစုဟာ အခြားကလေးတွေထက် စကားလုံးတွေကို ပိုပြီးလိုက်မှီနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
>> ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကို ပုံမှန်လို့ခေါ်မလဲ?
ကလေးတွေဟာ အသက် ၁ နှစ်လောက်မှာ စကား ၁ လုံးစ ၂ လုံးစ စပြောတတ်ပြီး အသက် ၁၈ လကနေ ၂ နှစ်လောက်မှာ စာကြောင်း တစ်ပိုင်းတစ်စလောက် ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက် ၂ နှစ်လောက်ထိ စကားမပြောသေးရင် ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ စကားပြော နောက်ကျတတ်တဲ့ အကြောင်းရင်းအများကြီး ရှိပါတယ်။
စကားပြောပညာရှင်တွေဟာ ကလေးရဲ့ နားလည်နိုင်စွမ်းကို လေ့လာပြီး စကားလုံးတွေ၊ စကားလုံးရဲ့အသံတွေကို ခွဲခြားပြီး သင်ပေးတတ်ပါတယ်။ လုပ်ပြတဲ့ လက်ဟန်ခြေဟန် အမူအယာတွေကို လိုက်လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာဟာ ကလေးဟာ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်မပူပါနဲ့။ ကလေးကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီး စကား လိုက်ပြောခိုင်းပါ။
>> စကားပြောနောက်ကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
♦ ယောက်ျားလေးများ : ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေထက်စာရင် စကားပြော နောက်ကျတတ်ကြပါတယ်။
♦ လမစေ့တဲ့ကလေး : လမစေ့ဘဲ မွေးတဲ့ကလေးတွေဟာ စကားပြောတာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ နောက်ကျတတ်ကြပါတယ်။
♦ အမြွာ : အမြွာတွေဟာလည်း စကားပြော နောက်ကျတတ်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
♦ စကားများတဲ့အကြီးတွေ : အကြီးကလေးတွေ အလွန်စကားများရင်လည်း အငယ်ကလေးဟာ သူ ပြောစရာ မလိုတော့သလို စကားပြော နောက်ကျတတ်ပါတယ်။
♦ နားပိုးဝင်ခြင်း : ကလေး အလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ နားပိုးဝင်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့အကြားအာရုံကို ထိခိုက်ခြင်းက စကားပြော နှောင့်နှေးစေနိုင်ပါတယ်။
♦ အခြားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာ အားသန်ခြင်း : တစ်ခါတလေ အခြားဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့် စကားပြောတာ နှောင့်နှေးနေတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အခြားအရာတွေအပေါ် ပိုပြီးအားစိက်ထုတ်နေရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
>> ကလေး စကားမပြောသေးရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
1. ကလေးနဲ့အတူ ဆော့ကစားပေးရင်း ကလေး စကားပြောအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါ။
2. ကလေးမှာ နားပိုးဝင်နေတာ ရှိ၊ မရှိ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်စစ်ဆေးပါ။
3. ကလေးသီချင်းခွေလေးတွေဖွင့်ပြပြီး လိုက်ဆိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
4. အရုပ်ဖုန်းတွေကလည်း ကလေးစကားပြောအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. ကလေးကို စကားပြောဖို့ သင်ပေးတဲ့အခါ မေးခွန်းမမေးပါနဲ့။ စကား လိုက်ပြောခိုင်းပါ။
6. TV အကြာကြီး မကြည့်ခိုင်းပါနဲ့။
ကလေးအများစုဟာ စကားပြော နောက်ကျတတ်ပေမယ့် အခြားကလေးတွေကို အချိန်မီလိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်အေးသွားအောင် ကလေးဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။